DVD cirib Menu - DVD Free cirib Menu Template
> Resource > DVD > DVD Free arrimo Menu ee DVD cirib
DVD cirib waa mid fudud oo si sahlan loo isticmaali DVD diinta iyo software qoraalka lacag la'aan ah. Waa la heli karaa si fudud ku dari DVD menu ah la arrimo DVD menu dhisay-in. Waxaa jira 6 arrimo menu DVD cirib in total. Hoos ka eeg:
Dhig Own DVD cirib arrimo
Tan iyo markii ay jiraan 6 oo kaliya arrimo menu DVD cirib heli karo. Waxaad la yaabi karaan oo ku saabsan in aad ku dari kartaa DVD caadadii arrimo cirib menu . Waa hagaag, aad sameyn karto, laakiin xirfadaha design farshaxanka iyo aqoon computer, iyo sidoo kale waqti iyo samir badan waxaa looga baahan yahay, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay tijaabo si ay u gaaraan template ah qanacsan menu u DVD cirib.
Haddii aad u malaynayso DVD bedeley ka ciyaaraan door muhiim ah ka aad DVD filimada guriga sameeyey, eegno Wondershare DVD Muqaal dhise 's DVD bedeley ma guurto ah iyo dhaceen dhisay-in. Waxaad samayn kartaa filimada DVD guriga iyo sidoo kale DVD bedeley xirfad sida pro ah effortlessly.